Semalt: Fandraharahana madinika ho toy ny lasibatry ny mpamono cyber
Ny mahazatra dia ny mahazatra ao amin'ny MNH Platinum, orinasa iray momba ny fanofana fiara. Littledia nahatsikaritra azy ireo fa ny soso-kevitry ny rohy mailaka dia mety hampiditra ny orinasa amin'ny loza.
Tany am-piandohan'ny taom-baovao, ny orinasa miorina ao Blackburn dia nahazo ny 12, 0000 ny rakitra ao amin'ny orinasanetwork encrypted. Avy eo, nangataka ny vidim-panavotana tokony ho 3 000 dolara ireo mpanao heloka bevava mba hanala ny antontan-taratasy.
Miaraka amin'ny ezaka rehetra hanesorana ilay virosy nefa tsy hamela ireo angona manan-danja manaporofo tsy azo tanterahina,Ny fikambanana dia tsy nanana safidy fa tsy nandoa vola. Ny talen'ny orinasa Mark Hindle nilaza fa tsy voaomana tanteraka izy ireonoho ny fanafihana cyber noho ny tsy firaharahiana ny mety ho fiantraikan'izany fanafihana izany dia mety ho eo amin'ny orinasa - raise alert when message contains.
Ity tranga ity dia tsy voatokana ary ny matihanina dia mampitandrina ireo orinasa madinikamanjavozavo kokoa noho ny fandrahonana ny fanafihana cyber satria ny ankamaroany dia tsy voaomana.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manadihady ny fomba ataon'ny jiolahy cyber amin'ny fanaovan-tsakafo madinika.
Tsy ara-tantara, ny orinasa madinika sy mena (SME) dia tsy tanjona iraisana amin'ny heloka bevava cybersaingy tamin'ny taona 2015, Toni Allen dia nilaza fa niova tanteraka ny zava-drehetra. Araka ny fanadihadian'ny governemanta momba ny fandikan-dalàna momba ny fandriam-pahalemana,Ny 75 isan-jaton'ny orinasa madinika dia nitatitra ny mety hisian'ny fanafihana tamin'ny taona 2012 ary nihamaro ny fironana tamin'ny 2013 sy 2014..
Antontan'isa avy amin'ny Symantec, orinasa iray miompana amin'ny fiarovana cyber, dia manondro fa mihoatra ny antsasaky nyNy fanafihan'ny fanafihan'ny fanafody fitifirana natao tamin'ny alàlan'ny mailaka tamin'ny taona 2012 dia natao tamin'ireo orinasa kely
Ny fitsipika eoropeanina vaovao dia mahatonga ny olana momba ny fiarovana amin'ny aterineto ho an'ny orinasa madinikasatria manana tanjona amin'ny fiarovana ny angona mpanjifa izy ireo. Ny fitsipika vao navoaka vao haingana dia ho tonga amin'ny 2018 ary mety hiterakany fikambanana dia nandoa onitra 4 isan-jaton'ny fidiram-bola isan-taona na 20 € na mihoatra noho izay mety hitranga amin'ny famerana ny fandriam-pahalemana.miaraka amin'ny angona avy amin'ny mpanjifa.
Ny mpandoa lalàna dia mahatsikaritra ny SME ho toy ny mason-tsivana amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, fahitalavitra amin'ny loka goavana izy ireo.
Fanentanana ho an'ny Cyber ​​Streetwise, ny tetikasan'ny Office Home dia manasongadina ity manaraka itytahaka ny fandrahonana maimaim-poana amin'ny aterineto ataon'ny SME:
Nitranga ny fanafihana raha niditra tao amin'ny tambajotram-piarahamonina ny jiolahy tamin'ny alàlan'ny fanatsaranany fahatsapana tsy voavaha ao anatin'ny fampiharana, izay mahatonga azy ireo ho mora ny miditra amin'ny antontan-kevitra momba ny orinasa.
Nitranga izany rehefa nisy fampiharana ratsy natao tamin'ny ankamaroan'ny tranga nahazo azy tamin'ny alalan'ny phishingmailaka manakona ny mombamomba ny tambajotram-piarahamonina. Avy eo, mangataka vidim-panavotana ny mpangalatra eo amin'ny 1000 dolara eo ho eoampiasao ny fanalahidy famaritana.
Ny fahadisoan'ny olombelona
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny olona no rohy indrindra amin'ny rindrambaiko nomena, ary manan-danjaNy ampahany amin'ny fanitsakitsahana ny vaovao dia vokatry ny angon-drakitra na fanapariahana ny olona diso. Na ny fanafihana tsotra azadia mety hisy fiantraikany manan-danja amin'ny toe-javatra misy ny PII.
fandàvana ny fanafihana amin'ny serivisy
Rehefa misy fikambanana iray manana volavolan-kevitra goavana ao amin'ny serivera manosika azykanosa ratsy. Ireo karazana fanafihana ireo dia mora atao amin'ny fampiasam-bola madinika.
Izany dia mitranga rehefa misy olona manafika olona iray miaraka amin'ny orinasamanimba na manakona ny kaontiny mailaka ary manery olona iray manana fahefana ara-bola hanatanterahana izany.